မြန်မာမွတ်စလင်(မ်)ရေးရာ(ဂျာမဏီ): 02/01/2010 - 03/01/2010
Prophet MOHAMMAD (s.a.w)`s Birthday
Today is our beloved prophet Mohammad (S A W)'s birthday. So let's call Prophet Day (Yom-An- Nabi).
Please don't forget to recite Salwaat as much as you can today and everyday.
Posted by mbma at Friday, February 26, 2010 No comments:
62nd Anniversary Chin National Day (Germany)
Posted by mbma at Sunday, February 21, 2010 1 comment:
လူ့ဘ၀ကြီး၏အကြီးမားဆုံးသော အသိတရား (၁၄) ချက်
၂။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ဆုံးရှုံးခြင်းသည် မိမိဧ။် မာနကြောင့်ဖြစ်သည်။
၃။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော အသိမဲ့ခြင်းသည် မိမိ ကိုယ့်ကိုမိမိ လိမ်လည်နေ ခြင်းဖြစ်သည်။
၄။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ၀မ်းနည်းရခြင်းသည် မိမိဧ။် မနာလို ၀န်တိုသော စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၅။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော မှားယွင်းမှု လုပ်ရပ်သည် မိမိဧ။် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်း ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၆။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ပြစ်မှုပြုခြင်းသည် မိမိဧ။် အနိုင်ကျင့်လိုသော စိတ်ဓာတ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
၈။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးလေးစားခံရခြင်း
သည် မိမိဧ။် ကြံ့ခိုင်သည့် စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။
၉။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံး စီးပွားပျက် ရခြင်းသည် မိမိဧ။် ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ် မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁၀။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ချမ်းသာရခြင်းသည် မိမိဧ။် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၁။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော အကြွေးသံသရာ ဖြစ်ခြင်းသည် လူမှုရေး အကြွေးသံသရာဖြစ်သည်။
၁၂။လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော လက်ဆောင်မွန်သည် မိမိဧ။် သည်းခံခွင့် လွတ်တတ်သော စိတ်ဓာတ် ဖြစ်သည်။
၁၃။လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော လိုအပ်ချက်သည် မိမိဧ။် အကြင်နာတရား မေတ္တာ စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။
Posted by mbma at Wednesday, February 17, 2010 No comments:
ကုရ်အာန်တွင်လှိုင်ဂူ ကဏ္ဍဟူ၍ပါရှိသည်။ ထိုကဏ္ဍသည် အချိန်နှင့်စပ်လျှင်း၍
အသိပညာပေးသော ကဏ္ဍဖြစ်သည်။ လူသားကမ္ဘာတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော အချိန်
နှင့်တစ်ချိန် တစ်ခါတည်းတွင် ကွဲပြား ခြားနားသော အခြားအချိန်များလည်း
ရှိနေသေးကြောင်း ကုရ်အာန်က လက်တွေ့ပြသချက် ဟုဆိုရ ပေမည်။
ထိုလှိုင်ဂူကဏ္ဍ၁၀ မှ ၂၆ တွင် လူငယ်တစ်စုသည် ဘုရင်တစ်ပါး၏
ဖမ်းဆီးကွက်မျက်မှုမှလွတ်ကင်းရန် လှိုင်ဂူတစ်ခု အတွင်းသို့ဝင်ရောက်၍
ထာဝရအရှင်ထံ ခိုလှုံခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူခွေးတစ်ကောင် လည်းပါလာခဲ့သည်။
ထိုအခါအရှင်က၎င်းတို့၏ အကြားအာရုံ ပေါ်သို့၊
တံဆိပ်ခပ်နှိပ်၍နှစ်ပေါင်းများစွာ အိပ်စေခဲ့သည်။ ထိုဂူပေါက်ဝတွင်
၎င်းတို့၏ခွေးက အ ပြင်ဖက်သို့မျက်နှာမူသော အနေအထား ဖြင့်၎င်း
တို့နှင့်အတူအိပ်ပျော်လျက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုဂူ၏ အနေအထားမှာ နေတက်ချိန်နှင့်
နေမွန်းလွဲချိန် တို့တွင် ဂူထဲသို့ နေရောင် မရောက်ဘဲ လှိုင်ဂူ၏ ညာဖက်နှင့်
ဘယ်ဖက်ကိုသာ နေရောင်ရောက်ရှိသည်။ ဂူပေါက် ဝ သည် တောင်ဖက် သို့မဟုတ်
မြောက်ဖက်သို့ မျက်နှာမူထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဂူပေါက်ဝမှ
လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်၍အိပ်နေသောခွေး၏ အနေ အထားမှာ မြင်ရသူအဖို့
(ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ဟု ထင် ရ ဖွယ် ရရှိသည်။) အလွန်ကျောချမ်း၍ အ သင်လှည့်ပြေး
သွားမည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ထိုအိပ် ပျော် နေသူများအား တနေ့လျှင်
ဘယ်ဖက်နှင့် ညာဖက်သို့ နှစ်ကြိမ်စောင်းလှည့် စေခဲ့သည်။ အချို့က
လှိုင်ဂူထဲမှ လူအရေအ တွက် နှင့်စပ်လျှင်းပြီး
လူသုံးဦးနှင့်ခွေးတစ်ကောင်ဟုဆိုကြသည်။ အချို့က လူ ငါး ဦးနှင့်
ခွေးတစ်ကောင်ဟူ၍ မှန်းဆ၍ မမြင်မတွေ့ပဲဆိုကြသည်။ အချို့ကလည်း လူသုံး ဦး
နှင့်ခွေး တစ် ကောင် ဟူ၍လည်း ဆိုကြသည်။ ထိုလှိုင်ဂူထဲမှ လူဦးရေ အတိအကျကို
ငါ၏ မွေးမြူ သော အရှင် သာ အတိအကျ သိသည်ဟူ၍ အသင်တမန်
၎င်းတို့သည် လှိုင်ဂူထဲတွင် နှစ်ပေါင်းသုံးရာ၊ ကိုးနှစ်ထည့်ပေါင်း၍
အိပ်စက်ခဲ့ ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ နှစ် ပေါင်းများစွာ အိပ်ရာမှ
ထလာကြသော လူစုအနက် တစ်စုက ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှ အိပ် စက်ကြ သနည်း
ဟူ၍အခြား အုပ်စုကို မေးမြန်းခဲ့ကြ၏။ ထိုအခါ အခြားအုပ်စုက၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ် ရက် သို့ မဟုတ်နေ့ ဝက် လောက် အိပ်ပျော်သွားသည်ဟု
ဆို၏။ ထိုအခါမည်မျှအတိုင်းအတာအထိ ကျွန်ုပ်တို့ အိပ် ခဲ့သည်ကို
အရှင်သာလျှင် အတိအကျ သိမည်ဖြစ်သည်ဟု တစ်ဦးကဆို၍ ဤငွေ ဒင်္ဂါး ဖြင့် လူ တစ်
ယောက် ကိုမြို့ထဲသို့ စေလွှတ်ပါ၊ ထို့နောက် အားလုံးစားသုံးရန်
စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော အစား အစာ များကို ဝယ်ခိုင်းပါဟုတစ် ယောက်
ကပြောဆိုခဲ့သည်။ လှိုင်ဂူ ထဲမှ လူအားလုံးစားသုံးရန် ပစ္စည်း
သွားဝယ်သူအနေဖြင့်၊ သိုသို သိတ်သိတ်၊ လှို့ဝှက်စွာဖြင့်
သတိနှင့်သွားရန်နှင့် ဂူထဲတွင် ၎င်းတို့ ရှိနေ သည်ကိုအခြားသူများမသိရန်မှာ
ကြားခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ကအသင်အား (ဈေးသွား ဝယ် သူ အား) မြင်သွားပါက
ခဲပေါက် ၍သေဒဏ် ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ သာသနာ အ တွင်း သို့
အသင့်အား ဓမ္မဝင်စေခဲ့မည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပါက အသင်သည် ဘယ်သောအခါမျှ အောင်
်မြင် သူမဖြစ်နိုင် တော့ပေ။ လှိုင်ဂူအတွင်းမှ လူတစ်စုသည် ၎င်းတို့
လှိုင်ဂူထဲတွင် အိပ်စက်ခဲ့သော အချိန် ကာ လသည် တစ်ရက်မျှ လောက်ဟု ထင်မှတ်၍
ထိုလှိုင်ဂူ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ခိုလှုံခဲ့ ရသော နောက် ဆုံး အဖြစ် အပျက်
များကို ကောင်းစွာသတိရလျှက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ဘာသာ သာသနာ ကိုင်းရှိုင်း
သူ လူငယ်တစ်စု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်သော သာသနာကို စွန့်လွှတ်ရန် ဘုရင်၏
အား ဓမ္မ ခိုင်းစေချက်မှ ကင်းဝေးရန် လှိုင်ဂူထဲတွင် အရှင့်ထံခိုလှုံခဲ့
ထိုအကြောင်း အရာကို ကုရ်အာန်တွင် ဖော်ပြခြင်းသည် အလ္လာဟ်က မိမိ၏
ကတိအတိုင်း အ ကောင် အထည် ဖော်ဆောင်သည်ကို လူသားများအား
အသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်း တူစွာ “ကေယာမသ်” ကမ္ဘာ့တရားစီရင် မည့်နေ့သည်
ဧကန်မုချ လုံးဝ ဥဿုံဖြစ်မည်။ ထိုကဲ့သို့ ကေယာ မသ် နေ့ ပြန်ရှင်ထ ကြ
သူတိုင်းသည် လည်း ဖော်ပြပါ လှိုင်ဂူထဲတွင် နှစ်ပေါင်း(၃၀၀) အိပ်ပျော်ရာမှ
ပြန်လည် ထလာကြ သော လူတစ်စုကဲ့ သို့ တစ်အောင့်မျှပင် ရှိမည်ဟု ခံစားကြ
ရမည်ကို လက်တွေ့ ပြခြင်း တစ်ရပ် ဖြစ် သည်။ ထိုလှိုင်ဂူထဲမှ လူတစ်ယောက်က
ဈေးထဲသို့ စားသောက်ဖွယ်ရာ သွားဝယ် ရာ၌ ၎င်းတို့ အား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်
ခဲ့သောဘုရင်၏ ခေတ်ဟု ထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအချိန်၌ ထိုဈေးလာဝယ်
သူ ၏ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှု နှင့် ထိုသူသုံးစွဲသော ငွေဒင်္ဂါးများကို မြင်တွေ့
ခြင်းဖြင့် ထူး ဆန်း အံ့ သြ ဘွယ် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတဆင့် ထိုသတင်း
သည်လက်ရှိ အုပ်ချုပ်လျှက် ရှိသော ဘုရင် ထံ သို့ ရောက် ရှိခဲ့ သည်။
လူတို့၏ အမြင်တွင် ဈေးဝယ်လာသူအား အံ့သြ စွာဖြင့် ဝိုင်းဝန်း ကြည့် ကြ
ခြင်း ကြောင့် ဈေးဝယ် လာ သူသည် ဘုရင်၏ ဒုက္ခပေးမှုကို စိုးရိမ် ၍
အခြားအဖော်များကျန်ရှိရာ လှိုင်ဂူသို့ ပြန်သွား ဖွယ်ရာရှိ သည်။ ထိုဂူမှ
အုပ်စု တစ်စုလုံး တောနက်အတွင်းသို့ ထွက်ပြေး သွားရာ၊ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်
လျှက်ရှိသော ဘုရင် က ၎င်း တို့၏ နောက်မှ လိုက်သည်။ နောက်ဆုံး ဘုရင် ၏ စိတ်
တွင် ဆက် လက် မလိုက်လို တော့ပဲ ထို သူတော်စဉ် များ ပျောက်ဆုံးသွားသော
နေရာတွင် ဦးချရာ အ ဆောက် အဦး ဆောက်လုပ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပုံရှိ၏။
ဆက်လက်၍ ထိုသူများသည် မည်မျှ အတိုင်းအ တာအ ထိဆက်လက်အသက်ရှင်ကြသည်၊
သို့မဟုတ် ဆက်လက်အိပ်ပျော်သွားကြသည်ဟူ၍ ဖော် ပြထားခြင်းမရှိပေ။
၎င်းတို့ အိပ်စက် ခဲ့သော အချိန်နှင့် စပ်လျှင်းပြီး၁၈း၂၅ (၎င်းတို့သည်
နှစ်ပေါင်းသုံးရာတွင် ကိုးနှစ်ပေါင်း ထည့်၍ အိပ်စက် ကြသည်ဟုဆိုထားသည်။)
ကုရ်အာန်တွင် အထက်မှ နှစ်ပေါင်း သုံးရာ တွင် ကိုးနှစ် ပေါင်း ထည့်
ခြင်းဟူသော စကားသည် မည်သည့်ခေတ် မည်သည့် လူတစ် ဦးတစ်ယောက် ကမျှ အ ငြင်း
ပွား ၍ မရသော အသုံး အနှုံ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတွင် Solar Calendar (နေပြက္ခဒိန်)
နှင့် Lunar Calendar (လပြက္ခဒိန်) ဟူ၍နှစ်မျိုးနှစ်စား သုံးစွဲကြသည်။
နေပြက္ခဒိန်၏ နှစ်ပေါင်း သုံးရာသည် လ ပြက္ခဒိန်၏ နှစ်ပေါင်း ၃၀၉နှစ်
်ဖြစ်သည် အကယ် ၍ နှစ်ပေါင်း၃၀၀ ဟု အထက်ပါ အာယာသ် တွင် ဖော်ပြထား ပါက
လူသားများ အနေဖြင့် လပြက္ခဒိန်အရ နှစ်ပေါင်း၃၀၀ သို့မဟုတ် နေပြက္ခဒိန်အရ
နှစ်ပေါင်း ၃၀၀လားဟူ ၍ စောရကတက် ၍ မရနိုင်ရန် အတိအကျ နေပြက္ခဒိန်
အရနှစ်သုံးရာ၊ လ ပြက္ခဒိန် အရ ၃၀၉နှစ်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုနည်း တူစွာ ကေယာမသ်ပြန် လည်ရှင် သန်ကြ ရာတွင်လည်း
“ဘရ်ဇခ်”ဟူသောအချိန်နှင့်အာကာသ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှ ကင်းဝေးသော နေရာမှ
ပြန်လည်ထကြသည့်အခါ အထက်မှ လှိုင်ဂူနေ လူသားများကဲ့သို့ တစ်ရက်၊ နေ့တစ်ဝက်၊
Posted by mbma at Monday, February 15, 2010 No comments:
သို့သော် နင်သည် နောင်လာနောက်သားတို့အဘို့ သက်သေသာဓကတော်တပါးဖြစ်စေ၇န် နင်၏ကိုယ်ကာယကို ငါအသျှင်မြတ် ယခုကယ်ဆယ်တော်မူ၏ ။ ကြည့်ကြလော့ လူသားတို့ အနက်များလှစွာသောသူတို့သည်ငါ၏သက်သေသာဓကများကိုသတိမမူကြချေ။
ကု၇်အာန် ( ၁၀း၉၂ )
[فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً‌ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ
[10:93] فَٱلۡيَوۡمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايَةً۬‌ۚ وَإِنَّ كَثِيرً۬ا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنۡ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ
[10:92] So this day We will save thee in thy body alone that thou mayest beaSign to those who come after thee. And surely, many of mankind are heedless of Our Signs
ထာ၀၇မှန်ကန်နေသော ပ၇မတ္တ သစ္စာတ၇ားကို ကု၇်အာန်ကျမ်းတော်မှအပ
အခြားနေ၇ာများတွင်မတွေ့နိုင်ပါ။လူသားတို့၏ ခန့်မှန်းကြံစည် တွေးတောမှု များသည် ယနေ့တွင်မှန်ကန်နေသော်လည်းမနက်ဖြန်တွင်မူမသေချာပေ။ ထိုနည်းအတူ အံ့မခန့်းတဟုန်ထိုးတိုးတက်နေသော သိပံပညာသည်ပင်လျှင် တနေ့တွေ့ရှိမှုနှင့် နောက်တနေ့ တွေ့၇ှိမှုတို့မတူနိုင်ပါ။
ထာ၀၇မှန်ကန်မှု (Absolute truth) သဘောတ၇ားသည်လူသားဥာဏ်စဉ် အဆင့်အတန်းဖြင့်
်စောဒကတက်ကြလျှက်၇ှိမြဲဖြစ်သည်။ထိုသို.လူသားတို့တွေးတော ကြံစည် တွက်ဆမှုများ၏
မျက်မှောက်လက်၇ှိဆန်းသစ်လျှက်၇ှိသောခောတ်သစ်သိပံ္ပပညာ၏အကူအညီဖြင့် စမ်းသပ် အဖြေထုတ်၍မ၇နိုင်သော သဘာဝလွန်အံ့သြဆန်းကြယ်မှုများမှာ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်
၇ှိလျှက်၇ှိနေသေးသည်ကို မည်သူမျှမငြင်းနိုင်ပေ။ ထိုဆန်းကြယ်မှုဖြစ်၇ပ်ဆန်းများ၏ လျှို.၀ှက်ချက်များ ကိုသိလိုသည့် သဘောတ၇ားများသည် လူသားအများစုတွင်၇ှိတတ်ကြသည်မှာဓမတာပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၇ှာဖွေ တွေးတော ကြံဆ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပုံစံများမှာကားတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တူညီနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
အချို့ကထိုသို့သဘာဝလွန်ဖြစ်၇ပ်ဆန်းများကို ကိုယ်တွေ့ တွေ့၇ှိပါက“ပ၇မတ္ထ သစ္စာတ၇ား”၏အကူအညီဖြင့်တိတိကျကျ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာမှု
ပြုလုပ်ကြသည်။ အချို့ကသိ၇ှိမှုအသိဖြင့်သာ လုံလောက်တင်းတိမ်ကြသည်။ အချို့ကမူ ယနေ့မျက်မှောက်
ခောတ်သိပံ္ပ၏ အကူအညီဖြင့် ၄င်းဖြစ်၇ပ်ဆန်းများကို ကိုင်တွယ် ဖြေ၇ှင်းတတ်ကြပေသည်။
အချို့ကမူသဘောတ၇ားမပါသောလက်တွေ့ထက် သဘောတ၇ားနှင့်အနှစ်သာ၇ပါ၇ှိသော လက်တွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပြုကြပြီးမှ နောက်ဆုံးတွင် ၄င်းလေ့လာစမ်းစစ်ကြသည့် ထာ၀၇မှန်ကန်လျှက်၇ှိသောသစ္စာတ၇ားအောက်၌ ဒူးထောက်ကြတတ်သည်။
အံ့သြခြင်းများစွာဖြင့်နုတ်မှထွက်ပေါ်လာသောစကားတစ်ခွန်းကြောင့့် “ကျွန်ပ်အစ္စလာမ်ကိုယုံပါပြီ ကျွန်ပ်ကု၇်အာန်ကိုယုံပါပြီ”
“အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်မှအပ အခြားကိုးကွယ်၇ာအသျှင်မ၇ှိပါ။ တမန်တော်မိုဟမဒ်သည်၎င်း၏စေတမန်
မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခ၇စ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ဦးပီပီ သမိုင်း ကျမ်း စာပေအထောက်အထားများမှတဆင့်ရှေ့ခောတ်အီဂျစ် မင်းဆက်များနှင့် ဖါရိုဘု၇င်အကြောင်း၊
၄င်းမင်းဆက်များအကြောင်းကောင်းစွာသိရှိသောပါမောက္ခတစ်ဦး ဖါရိုဘု၇င်(၇ာမ်ဆိးစ် ၂) ရုပ်အလောင်းရှေ့တွင်အလုပ်ရှုပ်လျှက် ရှိနေပါတော့သည်။
အိုး....တစ်ကယ်ဘဲလားဗျာ......ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဗျာ... ခင်ဗျားတို့မွတ်ဆလင်တွေယုံကြည်တဲ့ ဒီကု၇်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်က ဖါရိုဘု၇င်ေ၇နစ်ပြီး
သေတဲ့အကြောင်းနှင့် ၄င်း၏ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနောင်လာနောက်သားတွေ သတိသံဝေဂ၇စေ၇န် ဤကမ္ဘာပေါ်မှာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုတာလေ ဗျာ......ကျွန်တော့် နားတောင်ကျွန်တော်မယုံနိုင်စ၇ာဘဲ....ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်ကဘဲဒီအကြောင်းကိုဖေါ်ပြထား၇ပါလိမ့်...ဒီမာမ်မီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေ့ရှိခဲ့တာမှ ဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်လောက်ကမှ.... ဒီခန္ဓာကြီးကို အဲဒီကြားထဲ ဘယ်သူများထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါလိမ့်။ အား..မေးစ၇ာ
မေးခွန်းတွေကတော့ အများကြီးဘဲ။ တကယ်ဘဲ ယခုကျွန်တော့ရှေ့မှ မာမ်မီဖါရို အလောင်းကြီးဟာ ဟိုးတမန်တော် မိုးဆက်(မူဆာ) ကိုပင်လယ်နီကမ်းခြေထိလိုက်ခဲ့တဲ့ ဖါရိုဘု၇င်ကြီးပင်လား....
အစ္စလာမ်တွေယုံကြည်နေတဲ့ ဒီတမန်တော်မိုဟမဒ်ဟာ ဒီဖါရိုဘု၇င်အကြောင်းနှင့် ဒီခန္ဓာကြီးတည်ရှိနေတာ
ပါမောက္ခကြီးဒေါက်တာမော၇စ် တစ်ယောက်ဘယ်လိုမှကြိုးစားပြီးအိပ်သော်လည်း အိပ်လို့
မပျော်တော့ပါ။ သူ့၇ဲ့ ရှေ့းသမာကျမ်းတော်ကို လှန်၇င်း“ ဟော တွေ့ပြန်ပြီ ဒီဖါရိုး ”ှ“ပင်လယ်ကြီးသည်ဖါရိုဘု၇င်နဲ့၎င်း၏ကြီးမားလှသော စစ်တပ်ကြီးကိုဝါးမြိုခဲ့သည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အသက်မရှင်ခဲ့” ထွက်မြောက်၇ာကျမ်း(၁၄း၂၈) သူမကျေနပ်သေး
ဘာလို့ဒီဓမဟောင်း ငါတို့၇ဲ့သမာကျမ်းစာက ဒီသူ့ခန္ဓာ ဤကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေသေးကြောင်း ဘာလို့မပြော
အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်းဖြစ်သော ပါမောက္ခကြီးမော၇စ် တစ်ယောက်သူ့ေ၇ာင်း၇င်းလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဆေးနှင့်
မျိုးရိုးဗီဇ ၊မန္နုသဗေဒ၊ခန္ဓာဗေဒ ပေ၇ာ်ဖက်ဆာများ၊ဘူမိဗေဒ စပါယ်ရှယ်လစ်များနှင့်အတူ ခောတ်မှီနည်းပ
ညာ cutting edge စမ်းသပ်စစ်ဆေးေ၇းကိ၇ိယာများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းထဲတွင် အလုပ်ရှုပ်နေသူ၏ ပြင်းပြသော
သိလိုစိတ်မှာ “ဘယ်လိုများဒီမာမ်မီ (ဖာရို) အလောင်းဟာကွယ်လွန်ခဲ့ပါလိမ့် ”အနုစိတ်(Autopsy) စမ်းသပ်၍နေပါတော့သည်။
ညဦးယံဘက် ပညာရှင်အသီးသီး သက်ဆိုင်၇ာကဏ္ဍများကိုအသီးသီးစစ်ဆေးပြီး သကာလ နောက်
ဆုံး final report ကိုတင်ပြနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပေ၇ာ်ဖက်ဆာအသီးသီး၏ ကောက်ချက်အ၇ ဤမာမ်မီ(ဖာရို) ရုပ်အလောင်းမှာပင်လယ်တွင်ေ၇နစ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း များမကြာမီအချိန်တိုအတွင်းတွင်ပင် ပင်လယ်မှဆယ်ယူခြင်းကိုခံခဲ့၇ပြီး (၀ါ) ပင်လယ်ထဲတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာ မရှိခဲ့ကြောင်း
ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှဆားဓာတ်အထောက်ထားနှင့် ပင်လယ်နီရွံ့စေး အထောက်ထားများမှ
သက်သေခံလျှက်ရှိကြောင်းတို့ကို နောက်ဆုံးအစီ၇င်ခံစာကြီး တွင်တင်ပြလာကြသောအခါ.. ၄င်းအဖွဲ့
ကိုဦးဆောင်နေသော ပေ၇ာ်ဖက်ဆာဒေါက်တာမော၇စ် တစ်ယောက်
ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေ၇ပါတော့သည်။
“ အား...မဟုတ်နိုင်သေးပါဘူးေ၇ထဲမှာသေခဲ့တဲ့ ဒီမာမ်မီအလောင်းကြီးဟာ ဘာလို့များဒီလောက်
ပုံပန်းမပျက်ပဲ အခြားမာမ်မီများထက်ပင်လတ်ဆတ် လန်းဆန်းပကတိပုံအတိုင်း ဒီအချိန်ထိတည်ရှိနေ၇ပါ
လိမ့်.”..ဆေးသိပ္ပံနှင့် ခန္ဓာဗေဒအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်ထားသော ပါမောက္ခကြီး၊ လူသေရုပ်
လောင်းပေါင်းများစွာနှင့် ငယ်ငယ်ကတည်းကပင် မစိမ်းသောဆ၇ာဝန်တစ်ဦးအဖိှု့ဇဝေဇ၀ါနှင့် စဉ်းစား၍အ
တွေးများထူနေပါတော့သည်။ (Confirmation test) ပြန်လှန်စစ်ဆေးမှုများအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး အားမ၇ဖြစ်
နေသော ပါမောက္ခကြီး၏ပုံစံကို စာဖတ်သူများပင်မြင်ယောင်မိမည်ထင်ပါသည်။
အချိန်မှာကား ၁၉၈၁ ခုနှစ်
ပြင်သစ်သမတကြီး ဖ၇န်စစ်စကိုမစ်တ၇ာ အုပ်ချုပ်စဉ် ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်။အီဂျစ်အစိုး၇၏သဘောတူ
ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖာရိုဘု၇င်၇ာမ်စစ် (၂) ၏ရုပ်အလောင်းအား သမိုင်းကြောင်းအဆိုအ၇ ကမ္ဘာ့အကြမ်းတမ်းဆုံး၊
အ၇က်စက်ဆုံး၊ခေါင်းအမာဆုံးအီဂျစ်ဘု၇င်အား ခောတ်မှီဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ(မျိုးရိုးဗီဇ DNA သေဆုံးခြင်းဇစ်မြစ် နှင့် သေဆုံးခြင်း Date ရှေးခောတ်မာမ်မီပညာ၇ပ်၊မျက်နှာပြုပြင်မွမ်းမံမှု) ပြုလုပ်၇န်၇ည်
၇ွယ်ချက်တို့ဖြင့် ပြင်သစ်အစိုး၇မှကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသည်။ ပြင်သစ်လေဆိပ်သို့ေ၇ာက်လျှင်ေ၇ာက်ခြင်းပင် ပြင်
သစ်သမတ နှင့်တစ်ကွ ၄င်း၏အတွင်းဝန် ၀န်ကြီးများမှ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနှင့်တကွ အလေးပြုကြိုဆိုမှု
ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုပွဲပြီးလျှင်ပြီးချင်းပင် ဖါရိုဘု၇င်၏အလောင်းအား စူးစမ်းရှာဖွေစမ်းသပ်မှု
များပြုလုပ်၇န်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အထူး မန္နုဿဗေဒ ဓါတ်ခွဲခန်းမကြီးဆီသို့သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါသည်။
ပထမဦးဆုံး Cutting Edge Technology ဖြင့်သမိုင်းကြောင်းနှင့် ခန္ဓာဗေဒ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်၇န်၇ည်
၇ွယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က ပြင်သစ်သိပ္ပံပညာအကယ်ဒမီ၏ ဥက္ကဌ ကြီးမှာပေ၇ာ်ဖက်ဆာဒေါက်တာ မော၇စ်ဘူကိုင်း ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုယ်တိုင်ပင်ဦးစီးကာ ဖါရိုရုပ်ကလပ်ကြီးအား စူးစမ်းလေ့လာစမ်းသပ်ခွင့်၇ရှိခဲ့ပါ
မေးခွန်းပေါင်းမြာက်များစွာဖြင့် အဖြေမ၇နိုင်သေးသော ပါမောက္ခကြီး
ဒီနှစ်ပေါင်းသုံးထောင်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်အလောင်းကြီး၊ ရုပ်ကြွင်းမပျက်စီးသေးတဲ့မာမီကောင်ကြီး၊သူ
တို့အပြောအ၇ အီဂျစ်နိုင်ငံပင်လယ်နီကမ်းခြေရှိ ဂျဘလီယမ်း အ၇ပ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီအလောင်းကြီး၊
ယခုလက်ရှိအီဂျစ်သမိုင်းပြတိုက်ထဲမှာ ပြသထားတဲ့ဒီဖါရိုကြီး၊ မွတ်ဆလင်တွေကု၇်အာန်က တိတိပပပြောဆို
ဖေါ်ပြထားတဲ့ဒီဖါရိုဘု၇င်ကြီး၊ ကျွန်ပ်တော့ဗျာခောတ်မှီဆန်သစ်တဲ့ Technology အကူအညီမပါဘဲ ဒီအ
ကောင်ကြီးကိုသမိုင်းကြောင်းအ၇ စစ်ဆေးမယ်ဆို၇င်တော့ ယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ယခုလိုတိုးတက်တဲ့
စက်ကိ၇ိယာ Cutting Edge နည်းပညာ၊ဆေးသိပ္ပံပညာတွေ၇ဲ့ အကူအညီအ၇သာယုံ၇တာဗျာ ဟုခေါင်းခါ
လျှက်တတွတ်တွတ်ပြောကြားလျှက်သာရှိပါတော့သည်။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီမွတ်ဆလင်တွေပြောတဲ့ ကျမ်းစာ
တော်ထဲမှာ ဒီဖါရိုအကြောင်းတိတိပပ ပါရှိနေ၇တာလဲ? သူ့၇ဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာထိန်းသိမ်းထား
သူကားစစ်ဆေးမှုအထပ်ထပ်ပြုလုပ်ပြီး နောက်ဆုံးသံပြိုင်အဖြေ၇ရှိသော်လည်း မကျေနပ်နိုင်သေး၊
မာမ်မီကြီးမှာကား အီဂျစ်ပြည်သို့သာ တကြောပြန်ေ၇ာက်သွားပ်ါတော့သည်။ ဒေါက်တာမော၇စ် တစ်ယောက်
အိပ်မပျော်အခဲမကျေနိုင်သေးပါ။နောက်ဆုံး ၄င်းဖါရိုဘု၇င်ရှိ၇ာ အီဂျစ်ပြည်သို့ခ၇ီးဆက်၇န်သာဆုံးဖြတ်လိုက်
လေပါတော့သည်။အီဂျစ်နိုင်ငံသို့ေ၇ာက်လာပြီး သက်ဆိုင်၇ာ ဘူမိဗေဒ ရှေးဟောင်းသမိုင်းပညာရှင်
များ၊ဆေးပညာ ပညာရှင်များ၊မွတ်ဆလင်ပညာရှင်( စကော်လာ)များနှင့် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်လျှက်ရှိကာ အဖြေများကို
ရှာဖွေလျှက်ရှိပါသည်။ ကိုင်ရိုမြို့တနေ၇ာတွင် ၄င်း၏တွေ့ရှိချက်များကို နှီးနှောရှင်းလင်းမှုတစ်၇ပ်ပြုလုပ်နေစဉ်
မွတ်ဆလင်ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးမှ မတ်တပ်၇ပ်ပြီး ခင်ဗျားကျွန်ပ်တို့ကျမ်းလာဒီပါဒတော်ကို ပြန်နားထောင်ပါ
“ ငါအသျှင်မြတ်သည် အစ္စ၇ာအီလ် အမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်တစ်ဘက်ကမ်းသို့ ယူဆောင်တော်မူ၏။
ဖါေ၇ာမင်းသည် မိမိ၏စစ်သည်များနှင့်သူတို့ကိုမတ၇ားကျုးလွန် ခြားနားခြင်းဖြင့် မီအောင်လိုက်ကြ၏။သို့
သော်ေ၇နစ်မြှုပ်ဘေးထိသောအခါ သူသည်အစ္စ၇ာအီလ်အမျိုးသားတို့ယုံကြည်သော အသျှင်မှတပါးအခြား
ပါဝင်ပါ၏ဟုကြွေးကြော်၏။ ” ကု၇်အာန် ( ၁၀း၉၀ )
ဘာလဲ ယခုမှသင်ယုံကြည်သလော၊ ယခုတိုင်အောင်နင်သည်ထောင်ထားခြားနား၍ မတ၇ားပြုကျင့်
သူတို့ဘောင်တွင်ပါဝင်ပြီးမှ။ ကု၇်အာန် ( ၁၀း၉၁ )
သို့သော်နင်သည် နောင်လာနောက်သားတို့အဘို့ သက်သေသာဓကတော်တပါးဖြစ်စေ၇န် နင်၏
ကိုယ်ခန္ဓာကို ယခုငါအသျှင်မြတ်ကယ်တင်တော်မူ၏။ကြည့်ကြလော့ များစွာသောသူတို့သည် ငါ၏သက်သေ
သာဓကတော်များကိုသတိမမူကြချေ။ ကု၇်အာန် ( ၁၀း၉၂ )
အေးဆေးငြိမ်သက်စွာ ဂရုတစိုက်နားထောင်နေသော ပေ၇ာ်ဖက်ဆာကြီးတစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်
ငြိမ်သက်သွားကာ”ပ၇မတ္ထ သစ္စာတ၇ား” မှန်ကန်မှုနှင့် တိကျသေချာသောအဖြေကို ၄င်း၏ နှလုံးသည်းပွတ်ကြားထဲမှ ထုတ်လိုက်လေတော့သည်။ လူအုပ်ကြားထဲသို့၎င်း၏ ဟစ်အော်ချက်မှာကား
“ ငါသည်ဤကျမ်းမြတ်ကု၇်အာန်ကို တောင်တခုခုပေါ်တွင် ပစ်တင်ထားတော်မူခဲ့လျှင်၊ အကယ်စင်စစ်ထို
တောင်သည် အလ္လာဟ်အားကြောက်ရွံ့တုံလှုပ်ခြင်းကြောင့် နှိမ့်ချသောသဘောဖြင့် ၀ပ်စင်း၍ အစိတ်စိတ်
အမွှာမွှာ ဖြစ်သွားသည်ကို သင်တမန်တော် မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခဲ့၇လတံ့၊ ငါသည် ဤဥပမာများကို လူသား
တို့ဆင်ခြင်စဉ်းစားဘို့၇ာ ဆောင်တော်မူ၏။ ” ကု၇်အာန် ( ၅၉း၂၁ )
“ အလွန့်အလွန်သနားကြင်နာတော်မူသောမဟာဂရုဏာတော်သခင်အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်သည် အမှန်တ၇ားမြတ်နိုးသူတို့၏နှလုံးသားတံခါးများကို အမှန်ပင်ဖွင့်ပေးလေပြီတကား။”
ကု၇်အာန် ( ၂၈း၅၆ )
ပါမောက္ခကြီး၏သတင်းသည်ကား နေ၇ာအနှံ့သို့တမဟုတ်ချင်း ပြန့်နှံ့သွားလေတော့သည်။
၄င်းနောက်ပါမောက္ခကြီးသည် ၁၀ နှစ်တိုင်တိုင် အစ္စလာမ်နှင့်ပတ်သက်သော သိပ္ပံဆိုင်၇ာတွေ့ရှိချက်များ၊
ကု၇်အာန်နှင့်သိပ္ပံလေ့လာမှုများ၊အာ၇ဗီစာပေကို ဂဃနဏလေ့လာကာ Comparative studies များပြု
လုပ်ကာ အစ္စလာမ်ကိုအပတ်တကုတ် လေ့လာခဲ့သည်။ ၄င်းလေ့လာသောအသီးအပွင့်များအဖြစ် ဥေ၇ာပတ
ခွင်နှင့် ကမ္ဘာက အစ္စလာမ်ကိုပို၍သိလာကြသည်။ ”ကု၇်အာန်၊ဘိုင်ဘယ်လ် နှင့်သိပ္ပံ” ဟူသောခောတ်သစ်သိ
ပ္ပံပညာဖြင့်ရှေးကျမ်းဂန် များကို စစ်ဆေးခြင်း၊ကု၇်အာန်၏ခိုင်လုံသော၊တိကျသော၊မငြင်းနိုင်သော အမှန်တ
၇ားများကို အခြားကျမ်းဂန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာဖေါ်ပြခဲ့သည်။
လူသားများအားလုံးသတိ၇စေ၇န် ပါမောက္ခကြီးသည် ၄င်း၏တွေ့ရှိချက်များနှင့် စပ်လျင့်ပြီးကျမ်း
တော်လာ ဤအာယတ် (ပါဒ) တော်ကို နောက်ဆုံးမီးမောင်းထိုးပြလျှက်ရှိခဲ့ပါသည်။
မုသားစကားသည် ထိုကျမ်းတော်ကိုရှေ့မှသော်လည်းကောင်း၊နောက်မှသော်လည်းကောင်း မချဉ်းကပ်နိုင်
ချေ၊ထိုကျမ်းတော်သည် သဗ္ဗညုတေ၇ွဥာဏ်တော်ရှင် ချီးမွမ်းခြင်းတည်၇ာအသျှင်၏ထံတော်မှဖြစ်၏။ ကု၇်အာန် ( ၄၁း၄၂)
ကု၇်အာန်စူ၇ာဟ် ( ၁၀း၉၂ ) ကြည့်ကြလော့ များစွာသောသူတို့သည် ငါ၏သက်သေလက္ခဏာတော်များ
ထို့ကြောင့်အချို့သောသူတို့သည် သက်သေသာဓကတော်များကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်၇သော်
စစ်ဆေးစုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်မှုမရှိကြပေ။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော ကျွန်ပ်တို့မွတ်ဆလင်
များပင် ကု၇်အာန်ကိုအဓိပ္ပါယ်ရှိရှိသိရှိ၇န် မကြိုးစားကြချေ။ ကု၇်အာန်ကျမ်းလာအံ့ဖွယ်သက်သေသာဓကများ
ကိုပုံပြင်သဖွယ်သာ ခပ်ဝါးဝါးသိရှိတတ်ကြပြီး ၀ိေ၇ာဓိဘ၀ဖြင့်သာတင်းတိမ်နေတတ်ကြပေသည်။ကျွန်ပ်တို့
ယုံကြည်ထားသောကု၇်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်သည်တိကျမှန်ကန်သော ပ၇မတ္ထသစ္စာတ၇ားမှ မှန်ကန်မှုအ
ပြည့်ဖြင့်အံ့သြဖွယ်အပေါင်း၏ အထွဋ်အထိပ်အံ့သြဖွယ်ကျမ်းကြီးဖြစ်၇ာ မယုံကြည်ဒွိဟရှိသူမှန်သမျှအား
တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး အဖြေထုတ်၇န် နည်းမျိုးစုံဖြင့်အသျှင်မြတ်က ကျွန်ပ်တို့လူသားပင်မက နတ်သား(ဂျင်)
မလာအေကာအပေါင်းတို့ကိုပင်စိန်ခေါ်ထားသေး၏။တမန်တော်မိုဟမဒ် သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်မှ ယခုအချိန်ထိနှစ်ပေါင်း( ၁၄၀၀ ) ကျော်သည့်တိုင်အာင် ထိုစိန်ခေါ်မှုသည်အသက်ဝင်လျှက်ရှင်သန်နေ၏။
ခောတ်သစ်သိပ္ပံပင် ယခုအချိန်ထိ လိုက်မမှီသေးပေ။ နောက်ဆုံးနေ့တော်ကြီးအထိလည်း ထိုစိန်ခေါ်မှုကြီး
ကု၇်အာန်စူ၇ာဟ် (၁၇း၈၈) ထဲတွင် အိုတမန်တော် ဟောကြားလော့ အမှန်ဆိုသော်လူသားအား
လုံးနှင့်ဂျင်နတ်သားအားလုံးတို့သည် ဤကု၇်အာန်ကျမ်းတော်နှင့်တူသော ကျမ်းတစ်စောင်ကို စီကုံးေ၇းသား
၇န်စုရုံးစည်းဝေး၍ သူတို့အချင်းချင်းကူညီယိုင်းပင်းသော်လည်းဤကျမ်းတော်နှင့်တူသော ကျမ်းတစ်စောင်
ဒီ့အပြင်အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်သည်ထပ်ပြီးလျှော့ပေါ့၍ပင် စိန်ခေါ်ထားသေးသည်။ ကျမ်းတော်တစ်
စောင်လုံးထားဘိ တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံသော ကျမ်းတော်မြတ်ကု၇်အာန်၏အာယတ်(ပါဒ) တော်တစ်ခုပင်
ဖေါ်ပြထားသေးပေသည်။ အကယ်၍ ဤကျမ်းတော်ပါစကားများသည် အ၇ာခပ်သိမ်းကိုမွေးမြူတော်မူသော
အလ္လာဟ်အသျှင်မြတ်ထံတော်မှမဟုတ်လျှင် မကိုက်ညီမှုများ၊ လျော့၇ဲမှုများ၊ မမှန်ကန်မှုများကို တွေ့၇မည်ဖြစ်ကြောင့်ဖေါ်ပြထားသေး၏။ ကု၇်အာန် (၄း၈၃၊ ၁၀း၃၈၊ ၂၅း၆ )
၄င်း၏စကားနှင့်ပတ်သက်၍ ၄င်းကိုယ်တိုင်ပင်အာမခံထားကြောင်းကို ကျမ်းတော်မြတ်ကု၇်အာန် (၁၅း၉)်တွင်အသျှင်မြတ်သည်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖေါ်ပြထားသေး၏။ ထို့ကြောင့်ယနေ့အချိန်ထိကု၇်အာန်၏
မတွေ့ရှိ၇သေးပေ။နောင်တွင်လည်းတွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ကု၇်အာန် (၂း၂၃၊ ၂၄)
နောင်လာ နောက်သားများ မျက်တွေ့မြင်၇ကာသတိသံဝေဂတ၇ား၇နိုင်စေ၇န်အလ္လဟ်အသျှင်မြတ်